War-murtiyeed - Buug-gacmeedka Anabolics Steroids
Dib u eegis qoto dheer ee Superdrol (Methasterone) oo loogu talagalay jirka dhismaha
Wax kasta oo ku saabsan Superdrol (Methasterone) 1. Waa maxay Superdrol (Methasterone)? 2. Qiyaasta Superdrol 3. Wareegga Superdrol 4. Natiijooyinka Superdrol 5. Xayawaan badhidheer ah XDRUM. Superdrol u goynta 6. Superdrol loogu talagalay xNUMX. Superdrol waxtarrada 7. Superdrol dib u eegis 8. Superdrol iibinta 9. Superdrol loogu talagalay jirka jirka (kooban) 10. Waa maxay Superdrol (Methasterone)? Sidee ...
Dib u eegis qoto dheer ee Turinabol ee jirka dhismaha
1. Maxuu yahay Turinabol? Sidee u shaqeysaa? Turinabol (2446-23-3) waa steroid anabolic kaas oo lagu sameeyo iyada oo loo badalayo Dianabol. Steroid waxaa la soo saaraa laba isku-mid ah kiimikada Clostebol (4-chloretesterone) iyo Dianabol. Taasi waa sababta ka dambeysa magaca kiimikada ee Turinabol 4-chlorodehydromethyltestosterone. Isbeddelada qaab-dhismeedka kiimikada ayaa waxay bixiyeen guryaha daroogada ee sameeya ...
Waxaa laga yaabaa 6, 2019
1. Maxay tahay maqnaashaha testosterone? Sidee u shaqeysaa? Qanjiraha "testosterone decanoate" (5721-91-5) ayaa ka mid ah qalabka ugu badan ee lagu isticmaalo sterids ee suuqa oo ay sameeyaan ciyaartoyda cayaaraha iyo kuwa jidhka. Daroogada ayaa inta badan lagu iibiyaa magacyo kala duwan oo ku yaal suuqyo kala duwan, laakiin Neotest 250 ayaa u istaagay sida tan ugu caansan oo loo yaqaan 'testosterone decanoate'. Daawadani waxaa markii hore la soo saaray sida daroogada caafimaadka xoolaha ka hor inta aan la ogaan waxay ka caawin kartaa bodybui ...